Talaabooyinka inuu ka soo kabsado tirtiray ama musuq files Mp3
> Resource > Ladnaansho > Talaabooyinka inuu ka soo kabsado tirtiray ama musuq files Mp3
Sidee inuu ka soo kabsado MP3 files tirtiray ka Qalabka Computer ama Kaydinta
Maalmihii in dadka dhageystay music ka CD iyo cajalado cajalad tageen marti. Maalmahan, dad jecel inay ku raaxaystaan ​​music ka MP3 files ciyaaryahanka computer ama mp3. Files Mp3 si fudud loo kaydin karaa MP3 ciyaaryahan, iPod, telefoonka gacanta iyo drives adag.
Si kastaba ha ahaatee, tirtirka shil ah ama dhismaha erroring keeni karta in khasaaraha ka mid ah mp3 files. Waxaad bilaabi doonaa in aad ka fikirto tallaabooyin mp3 kabashada in aad isticmaali karto si ay u helaan files music lumay. Dhab ahaantii, waxaa jira weli fursad weyn oo iyaga ka soo kabsaday iyadoo la kaashanayo barnaamij MP3 soo kabashada. Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac yihiin barnaamijyada soo kabashada awood badan oo aad u awood inuu ka soo kabsado lumay ama la tirtiro MP3 files dadkii badnaa ka mid ah qalabka, oo ay ku jiraan drives ku computer, MP3 players, storage devices dibadda iyo noocyo kala duwan oo kaararka lagu kaydiyo. Iyada oo ay interface dareen iyo habka kabashada fudud, waxaad soo kaban karto, files mp3 ka storage devices ama your computer si fudud oo dhaqso.
Download version tijaabo ah barnaamijka MP3 hoos ku qoran. Version maxkamad Tani waxay awood aad ku eegaan helay files ka hor soo kabashada.
Kabsado mp3 files in 3 tallaabo
In socda, aan ka hadlo sida inuu ka soo kabsado MP3 files leh Wondershare Photo Recovery. Haddii aad tahay qof user Mac ah, fadlan kala soo bixi version Mac u leedahay in isku day ah.
Tallaabada 1 Daahfurka barnaamijka oo guji "Start" on interface bilowga.
Fiiro gaar ah: haddii aad rabto in aad soo kabsado mp3 files ka qalab lagu kaydiyo ama ciyaaryahan mp3, fadlan hubi in qalabka uu si fiican u xiran computer.
Tallaabada 2 Dooro qalab drive ama kaydinta maxalliga ah iyo ku dhufo "Scan" inaad raadiso badiyay mp3 files.
Fiiro gaar ah: Sida aynu wada ognahay, qalab lagu kaydiyo iyo drive deegaanka la tusay doonaa sida xarfaha drive on your computer, si aad u baahan tahay oo kaliya si aad u hubiso warqad saxda ah drive si ay u bilaabaan dib u soo kabashada.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan helay mp3 files.
Marka gool scan ah, dhammaan faylasha helo waa la soo bandhigi doonaa saddex qaybood, oo ay ku jiraan "Audio", "Photo" iyo "Video". Si aad u soo kabsado mp3 files, waxaad riixi kartaa "Audio" si uu u hubiyo in laga helo mp3 files waa waxa aad rabto inuu ka soo kabsado ama aan. Ka dib markii xulashada files, waxaad riixi kartaa "Ladnaansho" si ay u badbaadin computer ama qalab kale oo lagu kaydiyo.
1 Ha loo badbaadiyo files soo kabsaday meeshii idinka lumaan. Haddii kale dib u soo kabashada guuldareystaan ​​laga yaabaa. Fadlan dooro drive ama kaydinta kale qalab si ay u kaydiso.
2 Haddii aad rabto in aad soo kabsado helay mp3 files inta ay socoto baaritaan, inaad si degdeg ah ama waqti dambe badbaadin karo natiijada scan.
3 Waa mid aad u fudud lumin MP3 files ka aaladaha kaydinta iyo MP3 Players. Xaaladdan oo kale, waxaad si fiican dib lahaa ilaa aad MP3 files on your computer.